Ukunciphisa izindleko zokuthuthukisa isakhiwo sezimboni zezolimo kuzothinta kakhulu imixhaso
Ngo-2020, iRussia ihlela ukusabalalisa ngaphezu kwamahektha ayizigidi eziyi-1,3 zomhlaba wezolimo ongasetshenzisiwe
Amasampula wokungeniswa kwemikhiqizo elawulwayo azokwenziwa ngokuhlukumeza abanikazi bezimpahla
NgoSepthemba 9, ngefomethi yenkomfa yevidiyo, uRosselkhoznadzor wabamba izingxoxo nabamele i-General Customs Administration ye-People's Republic of China. Ukubonisana kwenzeke ngaphakathi ...
Kumalungu eNyunyana yababambiqhaza Bemakethe Yamazambane Nemifino
Balingani abathandekayo! Sithanda ukukwazisa ngamathuba amasha okuthengwa komanyolo wezimbiwa ekuhwebeni okuhlelekile (okushintshanisa). Amanyolo wezimbiwa athengiswa ku ...
Ukukhiqizwa kwamazambane nemifino esifundeni sase-Amur kuzokhula
Inhloko yePemamurye V.A. Orlov ibambe umhlangano wokusebenza mayelana nodaba lokukhulisa umkhiqizo wamazambane nemifino esifundeni sase-Amur. Umhlangano wamukelwe ...
Ngo-2020, ngokusho koMnyango Wezolimo waseRussia, kuzokwabiwa ama-ruble ayi-8,5 billion emisebenzini yokubuyiselwa komhlaba. Kusukela ngo-30 ...
Ngokusho koMnyango Wezolimo, kuyadingeka ukuthi kungeniswe amahektha ayizigidi eziyi-12 zezwe uNdunankulu uMikhail Mishustin uyalele uMnyango Wezolimo, uMnyango Wezimali ...
Emhlanganweni wama-487, uMkhandlu Wenhlangano wamukele izichibiyelo kuMthetho Wenkampani Yezimali "Ekuphatheni Okuphephile Kwezibulala-zinambuzane Nama-Agrochemicals" Nomthetho "Ku ...
NgoJulayi 17, iRosselkhoznadzor yabamba izingxoxo zocingo nabamele iGeneral Customs Administration yePeople's Republic of China. AbakwaRosselkhoznadzor babike ukuthi ngoJuni-Julayi 2020 ...
Umthethosivivinywa wokukhiqizwa kwezimbewu, owethulwe nguMnyango Wezolimo kuhulumeni ekupheleni kuka-Ephreli, ufuna ukubuyekezwa okukhulu. Njengoba abalimi beqinisekile ngalokhu, ...
Ngokwemininingwane yokusebenza kwezinhlangano ezilawula ezolimo eziyimboni yezimboni zezinhlangano ezikhethekile zeRussia Federation, kusukela ngoJuni 1, 2020, izwe lonke ...